स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको कुर्शी खोसाखोस - Health Today Nepal
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको कुर्शी खोसाखोस
December 21st, 2018 समाचार0comments
काठमाडौं, ६ पुष : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिवको कार्यकक्षको कुर्शीमा को बस्ने ? भन्ने विवादले उत्कर्ष रुप लिएको छ । एकजना सचिव हुनु पर्नेमा दुई जना सचिव भएपछि सचिवको कुर्शी खोसाखोस हुन थालेको हो । मन्त्रालयमा अहिले दुई जना सचिव छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरुवा भएर गएका केदारवहादुर अधिकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएपछि अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश ल्याएकी डा.पुष्पा चौधरीबिच कुर्शीको लडाईका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले दिनहू जसो रमिता हुने गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गत असोज २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरेको थियो । आफ्नो सरुवा नियम बिपरित भएको भन्दै डा. चौधरी कार्तिक १५ गते अदालत गएकी थिइन । अदालतले चौधरीका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी सरुवा भएको कार्यालय नगएर स्वास्थ्य सचिवकै कुर्शीमा बस्ने गरेकी थिइन । सरकारको निर्णय अटेरी गरेको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले अदालतको आदेश बदर गर्न भ्याकेट दर्ता गराएको थियो ।
डा. चौधरीको कार्यसम्पादनबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव सुरु देखि नै बेखुशी थिए । डा. चौधरीको सरुवा भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री यादवले मन्त्रीपरिषद्को स्विकृति लिएर मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. शुशिलनाथ प्याकुरेललाई सबै अधिकार सहित निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए । डा.प्याकुरेलले निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा काम गर्दा आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर गर्ने गरेका थिए । तर जिम्मेवारी विहिन भए पनि डा. चौधरीले सचिवको कार्यकक्ष र कुर्शी छोडेकी थिइनन् । सरुवा भएपछि अदालतको आदेश नआउन्जेलसम्म पनि उनले सचिवको कुर्शी छाडेकी थिइनन् । यसैबिचका सरकारले मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेपछि फेरि कुर्शीको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । मंसिर २४ गते अधिकारी सचिव भएर आएपछि पनि चौधरीले सचिवको कार्यकक्ष र कुर्शी छोडन मानेकी थिएनन । तर मन्त्रालयका अधिकारीले नयाँ सचिवलाई जसरी नी सचिव कै कार्यकक्ष चाहिने भनेपछि मंसिर २४ गते उनी जनसंख्या महासाखाको कार्यकक्षमा बस्न राजी भएकी थिइन । मंसिर २४ यता उनी सचिवको कार्यकक्षमा छिरेकी थिइनन ।
पुष ५ गते अदालतले डा.चौधरीको निवेदन र सरकारको भ्याकेटका बिषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै डा. पुष्पाका पक्षमा फैसला गरेपछि फेरि कुर्शी विवाद सुरु भएको हो । शुक्रबार सचिव अधिकारी बाहिर कार्यक्रममा गइरहेको बेला डा. चौधरी सचिवको कार्यकक्षमा सचिवको कुर्शीमा बसेपछि एउटा कुर्शीका दई जना कसरी बस्ने भन्ने विवाद सिर्जना भएको छ । रमाइलो त के भयो भने, भित्र सचिवको कुर्शीमा डा. चोधरी बसेकी थिइन भने बाहिर नेमप्लेट केदार बहादुर अधिकारी कै थियो । अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिएकाले सचिवको कुर्शीमा आफु बस्न पाउनु पर्ने भन्दै डा. चौधरी कुर्शीमा बसेर टेबुलमा अदालतको फैसलाको फोटोकपी राखेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । डा. चौधरीसंग सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाइनन् । अर्का सचिव अधिकारीले आफु जरुरी कार्यक्रममा भएकाले यस बिषयमा अहिले केही नबोल्ने बताए । सचिव विवादले स्वास्थ्य मन्त्रालय रमिते मन्त्रालय भएको छ । एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयमा त हिजोआज काम भन्दा रमिता बढी हुने गरेको छ । यस्तो रमिता कति दिन चल्ने हो थाहा छैन ।’ स्वास्थ्यमा चारतिरको समस्या छ । मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्ले केदारबहादुर अधिकारीलाई सचिव बनाएर पठाएको छ । अदालतले डा. चौधरीलाई नै निरन्तरता दिनु भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री यादव प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेललाई अधिकार दिएर काम गराउन चाहन्छन । अर्कोतिर नेपाच चिकित्सक संघ प्रशासन तर्फका अधिकारीलाई सचिव स्विकार नगर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेको छ । भद्रगोल अवस्थामा मन्त्रालय कसरी चल्छ ? ’
Previous article परिवार नियोजन संघको अध्यक्षमा हिमाल कसजू
Next article अनमोल आयुर्वेदको नि : शुल्क स्वास्थ्य सिविर
नर्सले तोकिएको पारिश्रामिक नपाएको भन्दै सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
गर्मी बढेसंगै स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको संख्यामा बृद्धि
हेटौँडा उपमहानगरपालिका बर्डफ्लुमुक्त घोषणा
Jun 26th 3:37 AM
Jun 26th 3:21 AM
Jun 26th 3:02 AM
Jun 26th 1:58 AM
विदेशमा उपचार गर्न जाने कसैलाई पनि सरकारले रकम नदिने
Jun 25th 2:43 AM
दुवै स्तनमा रहेको ट्युमरको ‘बिनाशल्यक्रिया’ सफल उपचार
Jun 25th 2:04 AM
रेडियोलोजी परिक्षण सेवामा सर्वसाधारणलाई ३३ देखि ५० प्रतिशत छुट
Jun 25th 1:26 AM
कार्यालय सहयोगीको भरमा प्रसूति सेवा
Jun 23rd 3:33 AM
सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले ३० रुपैयामै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने